Iimpawu zoLondolozo lweHlabathi
ULitha uhlawula kunye nemizila
Ngokuxhomekeke kwindlela yakho yokomoya, kukho iindlela ezahlukeneyo zokubhiyozela uLitha, kodwa ugxininiso luhlala lubhiyozela amandla elanga. ULitha, i-summer solstice , uwela ngoJuni 21 enyakatho ye-hemisphere, kwaye ngo-Disemba 21 ngaphantsi kwe-equator. Yisikhathi sonyaka xa izityalo zikhula ngokunyanisekileyo kwaye umhlaba ushushu. Singachitha ixesha elide leentsuku ezithambileyo, sivuyela ngaphandle, size sibuyele kwimvelo phantsi kweeyure ezinde. Nazi iinkqubo ezimbalwa ezinokuthi zilungiswe ukuba zenziwe yedwa okanye iqela elincinci.
Ukubeka iAtar Altare yakho
MichiTermo / Getty Izithombe
ULitha lixesha lokubhiyozela ilanga, kwaye uchitha ixesha elininzi njengoko unako ngaphandle. Zama ukusungula i-altare lakho leMidsummer ngaphandle xa kunokwenzeka. Ukuba awukwazi, kulungile-kodwa zama ukufumana indawo kufuphi nefasitela apho ilanga lizakukhanya khona kwaye likhanyise i-altare yakho yokumisa kunye nemibala yayo. Kaninzi "
Isikolo somlilo seMidsummer Night
Ihlobo lixesha elihle lokoqobo lwe-bonfire! Chris Pecoraro / E + / Getty Izithombe
Nangona esi siko sakwaMidsummer asikho mandulo, siphefumlelwe ngamasiko kunye neengcamango zamaCelt aseBritish Isles. Se benzisa iiyure ezinde zokuhlwaya uLitha, okanye u-Alban Heruin, kwaye uzukise i-solstice ngaphandle kwezulu. Ukuba unomdla kwi-Celtic lore, okanye unqwenela ukuhlonipha uNdikazikazi onguThathu, oku kusenokuba yinto epheleleyo. Kaninzi "
10 Iindlela Ezinkulu Zokugubha uLitha
Uza kubhiyozela njani i-sabbat? UMarc Romanelli / Iifotshane zeeMifanekiso / i-Getty Izithombe
NguLitha, usuku olude kakhulu lonyaka! Ilanga liya kukhanya ngakumbi namhlanje kunanoma yimuphi omnye unyaka wonyaka, kwaye ngumhla wokuphuma ngaphandle uze ubhiyozele. Sebenzisa ixesha elangeni kunye nosapho lwakho. Ukudlala ngaphandle, hamba ukunyuka, kwaye ujabulele yonke into enokuzonwabisa ngayo umhlaba. Nazi ezinye iimbono zeendlela zokubhiyozela i-summer solstice. Kaninzi "
Isiko Litha sokugubha uBawo
AleksandarNakic / Getty Izithombe
Kwiinkcubeko ezininzi zePaganism, ngokukodwa ezo zise-Wicca-based, kukho ukugxininisa kakhulu kwiNyanakazikazi . Ngamanye amaxesha, kukho ingqwalasela enkulu kumfazi ukuba iziganeko zamadoda azikhathaleli. Ngokumkela uThixo wesithethe sakho, unokubahlonela abantu abathintele ubomi bakho-nokuba bakhulisile, bakuthandayo, okanye bakhuliswa ngawe. Le nkqubo elula inika nabafana bakho ithuba lokuphuma apho kunye nokudanisa, kwaye banokubhiyozela abantu besilisa .
Ngaphambi kwesiko, yenza i-headdress kwindoda nganye eya kuba khona. Oku kunokubandakanya iimpondo, i-antlers, amasebe, iintsiba kunye nezinye iimpawu zokuzala kunye nobuntu. Iintloko zentloko zilula ukwenza; sebenzisa umgca wendwangu enzima okanye ikhadibhodi enqunywe kwisayizi, kunye nezinto zokugcina izinto. Ukuba abafana bakho bancinci, lo ngumsebenzi wezobugcisa obonwabisayo. Nika enye inkunzi ibe yinto enokuthi yenze inxalenye yoThixo oyiNtloko kwisithethe.
Kwakhona, kunika ilungu ngalinye leqela elinye uhlobo lweentambo zomsindo, iintambo, iintsimbi, njl. Le yinto engcono kakhulu eyenziwa kwiqela, nokuba yintsapho okanye isivumelwano. Ukuba ngokuqhelekileyo uphosa isangqa okanye ubize iiKota kule mkhosi, yenza njalo ngeli xesha.
Khanyisa ikhandle elibomvu okanye legolide phakathi kwesibingelelo sakho ukumela ilanga. UmPristi Omkhulu (HPs) okanye nabani na okhokelayo isithethe kufuneka babhekane nelanga, bathi:
Silapha njengentsapho (okanye ikhonti)
Kule ndlela ende kunazo zonke iintsuku.
Igunya leLanga lingaphezu kwethu,
kwaye ubushushu kunye namandla asikhumbuza
Kule ngongoma, amalungu eqela kufuneka agubungele iingqungquthela zawo, athande iingqungquthela zawo, athande iintsimbi zawo. Yenza ngokukhawuleza, phantse kwithempu yentliziyo. I-HP iqhubeka:
UThixo unamandla kwaye unamandla,
ulungile kwaye uvelise.
Unguye iNkosi yebaqashi,
kwaye kunye noThixokazikazi, kunye babumba ubomi.
Ngeli nqanaba, likhawuleza ukubetha kweengqungquthela kunye nokugxotha nje. I-HP iqhubeka kwaye ithi:
Simzukisa uNdikhoyo namhlanje, kwaye sibhiyozele umntu ngaphakathi kuye.
Ndiyabiza kuThixo oPhondo!
Siyakucela ukuba usihloniphe ngobukho bakho!
Ngoku iidrama kufuneka zikhawuleze ngakumbi. Indoda okanye inkwenkwe ekhethiweyo ukuba ibe nguThixo oTyhiweyo iholele amalungu esilisa eqela elijikeleze isibingelelo ngokugqithiseleyo, kumgca, ehambisana neengqungquthela zamadonsa kunye neengqungquthela. Njengoko amadoda ajikeleza isibingelelo, kufuneka ahambe ngokukhawuleza rhoqo.
Vumela amadoda namakhwenkwe ukuba badlale ngokujikeleze isibingelelo kangangoko amaxesha abathanda. Njengoko umdaniso uhamba ngokukhawuleza, umculo uya kuhamba ngokukhawuleza, de kubekho i-humpable hum of energy. Esi sihlandlo sisoloko sibonakalisa ubukho bobuThixo. Vumela umculo uqhube ikhosi-iya kugqiba xa sele ulungele ukuphela, kwaye ngelo xesha, umdaniso kufuneka umise kwakhona. Emva kokuba ukudansa kunye nokugquma kuphelile, ii-HP zifanele zikhweze:
Ixilongo enye, uThixo we-Hunt,
Sikuzukisa namhlanje ebusuku, kulolu suku olude kakhulu.
Sibhiyozela amadoda ebomini bethu,
Sibazukisa egameni lakho.
Ilungu ngalinye leqela, abesilisa nabesifazana, bangenza umnikelo ngeli xesha . Ukuba unomlilo ovuthayo, uphonsa iminikelo yakho emlilweni. Ukuba ungenayo umlilo, faka iminikelo yakho kwisibingelelo esikhundleni sakho.
Thatha amaxesha ambalwa ukucinga ngokulinganisela kwindoda neyowesifazane ebomini bakho, nakwihlabathi. Cinga ngamadoda obaziyo, kunye nalawo oya kuwazi kwixesha elizayo. Qaphela iimpawu ezenza zihlonishwe kwaye zifanelekile uthando lwakho. Xa usulungile, gxotha iigumbi okanye uvale isangqa.
Iindlela ezi-7 zokusebenzisa iMicrosoft Beach
Hlanganisa iigobolithi zokuvumisa kunye nomlingo - qiniseka ukuba uhlolisise nabahlali kuqala! UMike Harrington / iTeksi / i-Getty Izithombe
Ubhantsho lunokuthi lube yindawo yemilingo nendawo yokomoya. Nazi iindlela ezisixhenxe ezilula ongazisebenzisa ngokunxulumene neempawu zamagqirha zolwandle oluthandayo. Kaninzi "
Yibambe iSithethe seBhenge seBeyile
Mema intsapho kunye nabahlobo ukuba babhiyozele uLitha kunye nokupheka kwendawo yangasemva. Sawubona Mnandi / Iifotshane / I-Getty Izithombe
ULitha uwela phakathi kwehlobo, kwangaphambi kokuba izinto ziqale ukutshisa ngokungapheliyo kwiindawo ezininzi zehlabathi, ngoko lixesha eligqibeleleyo lokubhiyozela ngokuba nabahlobo kunye nosapho malunga nompheki. Kutheni ungasebenzisi ithuba lokuhlangana kunye nokuguqula umkhosi wokuzonwabisa omnandi we-summer solstice? Emva koko, ukuba ihlobo lihleka ngokuzonwabisa nabantu obathandayo, i-Litha yangasese yehobe yendawo yindlela efanelekileyo yokumaketha ixesha!
Qala ngokuhlobisa idilesi yakho yangasemva ngeempawu zonyaka. Ukuba isithethe sakho ngokuqhelekileyo sisusa isangqa phambi kwesithethe, cinga ukubeka izinto ezingavamile kwisibingelelo sakho nakwiindawo ezine :
Esikhundleni sokwenza isangqa ngendlela yendabuko, memela iindwendwe zakho kukunceda ukuba uvakalise izinto ngokugubha ixesha leLitha, usebenzisa ezinye zeempawu ezingentla. Yenza i-sparkler emoyeni xa kufike ixesha lokucela umlilo, okanye ungene kwidibansi ukumela indawo yamanzi.
Cwangcisa ukulungiselela ukutya ngaphambi kwexesha- ngokufanelekileyo usebenzisa enye indlela yelangatye okanye umlilo, njenge-grill yakho. Ixesha lakho umthendeleko oqala xa ukutya kukulungele. Lungisa isitya kunye neesampula ezimbalwa zento nganye kuyo-i-corn cobs, izinja ezishushu, i-burgers, njl njl-kwaye uyibeke kwisibingelelo, kwaye ubuze iindwendwe zakho ukuba zenze isangqa esisijikelezile.
Qala ngokumkela abahlobo bakho namalungu entsapho. Ukuba isiko lenu lihlonipha oothixo abathile, bacele ukuba bajoyine nawe emthendelekweni. Ukuba unqwenela ukugubha ixesha, unokuzihlonela imimoya yelizwe , okanye ubulele umhlaba kunye nelanga ngenxa yobumnandi phambi kwakho.
Emva kokuba uhloniphe ilanga kunye namandla azisayo, memela isivakashi ngasinye ukuya kwisibingelelo. Ngeli xesha, banokwenza umnikelo kwizithixo ezithile, elangeni ngokwalo, okanye kwimimoya yendawo yomyezo kunye nomhlaba.
Ekugqibeleni, cela oothixo besithethe sakho ukuba asisikelele ukutya kwisibingelelo. Wonke umntu kufuneka athathe umzuzwana ukuba ahlasele emisebeni yelanga, kwaye ushiye umjikelezo-ixesha lokuba udibe edilini lakho lasehlobo!
5 Ukuzonwabisa Ukuzibhidela uLitha kunye neNyana
Ihlobo lixesha elihle lokuba yintsana! Umfanekiso nge-Echo / Cultura / Getty Izithombe
ULitha yixesha le-summer solstice , kwaye kwiintsapho ezininzi, abantwana bayaphuma esikolweni, oko kuthetha ukuba lixesha elifanelekileyo lokugubha i-sabbat. Ngumhla ode kunayo yonke unyaka, abaninzi bethu badlala ngaphandle kwaye banandipha imozulu ebushushu, kwaye mhlawumbi unenhlanhla ngokwaneleyo yokubhukuda njengoko ugubha ilanga. Ukuba unabantwana ekhaya, zama ukugubha uLitha kunye nezinye zeengcamango ezinobungane kunye neentsapho. Kaninzi "
Yibambe isiXhosa seMidummer Sun
Anders Blomqvist / Getty Izithombe
ULitha yithuba elide lomnyaka ukuphuma ngaphandle, ujonge iiyure ezongezelelweyo zemini, ugubha ixesha leentsapho kunye nabahlobo. Unokwenza lo mkhuba njengeqela okanye ulungele ukwenza ukuba ube ngumsebenzi wedwa.
Uzakufuna izinto ezilandelayo:
Ikhandlela elikhulu lokumela ilanga
Ikhandlela ngalinye ngabanye abathathi-nxaxheba ukubamba
Kwakhona, qiniseka ukuba uyihobise isibingelelo sakho ngeempawu zonyaka-iimpawu zelanga, iintyatyambo ezitsha, iimveliso zonyaka zasehlobo kunye nezityalo ozivunayo. Kufuneka uyenze le nto ngaphandle kokuba kunokwenzeka, ukuze usebenzise ukukhanya kwelanga kunye namandla . Ukuba isithethe sakho sidinga ukuba usenze isangqa, qhubeka uye wenze okokuqala.
Thatha isikhashana umgangatho kunye neziko, uze uzigxilise. Bask kwimimitha yelanga, uvakalelwa ngumfudumalo ebusweni bakho, kwaye uyamkela amandla alo kuwe. Umntu okhokela isithethe-ukulungelelanisa injongo, siza kubiza loo mntu i-HP-kufuneka eme eqongeni.
I-HP: Silapha namhlanje ukugubha amandla kunye namandla elanga. Ilanga ngumthombo wokufudumala nokukhanya emhlabeni jikelele. Namhlanje, eLitha, i-summer solstice, sibonisa usuku olude kakhulu lonyaka. Ukususela kwiYule kude kube lusuku, ilanga liye lisondela ngakumbi emhlabeni. Iintyatyambo ziyahluma, izityalo zikhula, kwaye ubomi bubuye kwakhona. Namhlanje siyabahlonela oothixo nabankulunkulukazi belanga .
Ii-HP zikhanyisa ilanga lelanga kwisibingelelo.
Ii-HP: Ilanga ngumthombo wokugqibela womlilo kunye nokukhanya. Njengemithombo yonke yokukhanya, ilanga likhanya ngokukhawuleza kwaye lisasazeka kwihlabathi jikelele. Nangona kunika ukukhanya kunye namandla kulowo nalowo kuthi, akalokothi ancitshiswe ngokukwabelana kwamandla. Ilanga lidlula phezu kwethu ngalunye suku, kwisijikelezo esingapheliyo sokukhanya. Namhlanje, sibelana ngokukhanya komnye nomnye, siyidlulisa isangqa, senze isandi sokukhanya.
Ukusebenzisa ikhandlela lelanga, ii-HP zikhanyisa ikhandlela lakhe, kwaye zijika kumntu olandelayo kwisangqa. Njengoko ekhanyisa ikhandlela lomntu olandelayo, uthi: Ngamana ungafudumala kwaye uhlaziywe ngokukhanya kwelanga.
Umntu wesibini uphendukela kwisithathu, ukhanyise ikhandlela lakhe, aze adlule intsikelelo. Qhubeka de kube ikhandlela lokugqibela kwisangqa libhekile, ubuyele kwi-HPs.
Khumbula, lo mbhiyozo ovuyayo-ukhululeke ukuquka ukudansa, ukubetha, umculo okanye udonga wendonga njengoko ujabulela amandla elanga!
Njengomntu ngamnye kwiqela eliphethe ikhandlela elikhanyisiweyo, i-HP iyabiza oothixo kunye noodadekazi belanga. Zive ukhululekile ukufaka okanye ukufaka izithixo ezahlukeneyo zelanga njengoko isithethe okanye iimfuno zakho zifuna.
I-HPs: Oothixo abasikhuphayo , sizukisa!
Ncoma, Ra , inqwelo yakhe enamandla isenza sikhanyise kusasa ngalunye!
Siyabonga, Apollo, osizisa amandla okuphilisa ilanga!
Sawuni, uSaule, onokuqhakazila kwelanga njengoko ilanga lizuza ngamandla!
Isibongo, iHelios, iinqwelo zayo ezinkulu ziqhubela iintangatye ezulwini!
Hail, Hestia , ogama lakhe elingcwele likhanyisa indlela yethu ebumnyameni!
Isibongo, uSunna, ngubani udade wenyanga, kunye nomlethi wokukhanya!
Sikubiza namhlanje, kukubulela ngeentsikelelo zakho, ukwamukela izipho zakho. Sifumana ngamandla akho, amandla akho, ukukhanya kwakho ukuphilisa, kunye namandla akho okunika ubomi!
Ncoma kuwe, oothixo abanamandla noothixokazi belanga!
Ilungu ngalinye leqela kufuneka libeke ikhandlela lazo e-altare, lijikeleze ikhandlela lelanga.
I-HPS: Ilanga liphuma ngaphandle, lingalokothi life, alize liphele. Ukukhanya nokufudumala kwanamhlanje kuya kuhlala kunye nathi, njengoko imihla iqala ukukhula emfutshane, nobusuku bukhula banda. Siyabonga, oothixo belanga!
Mema wonke umntu ukuba athathe ukufudumala kwelanga kwakhona, kwaye xa usuphelile, phelisa isithethe njengoko uqhelekileyo.
Isithethe Sokuhlonipha Isivuno Sokuvuna
I-Spell ekhawulezileyo yokuMisa i-Gossip
Ngaphi Iintlanga Zithandaza?
Izigqibo zeNtsha zikaNtsha zoNyaka
Ilishumi elinesibini kunazo zonke eziphezulu zeR & B Musicians
Amaqumrhu kunye nemisebenzi yeCollagen